Kungani i-PR Dude yakho Yehluleka Kuwe Martech Zone
Kungani i-PR Dude yakho Yehluleka Kuwe
NgoLwesihlanu, ngoDisemba 23, i-2011 NgeSonto, Okthoba 4, 2015 Douglas Karr
Ngenkathi ngiyazisa impikiswano ye-tweet ngezikhathi ezithile, njalo ngezikhathi ezithile kufanelekile ngokwabelana nengxoxo lapha futhi siyixoxe ngokuqhubekayo. Isibonelo engisinikezayo namhlanje siqale ngokukhishwa kwabezindaba esisebenze noDittoe PR ukumemezela okusha kwabo iwebhusayithi.
I-PRDude… umemezele ngokwakho umvikela wemboni yezobudlelwano bomphakathi ongaziwa (isu elihle lenhlalo), uthathe i- isitatimende sephephandaba ukwenza umsebenzi ngoba bekungalingani nombono wakhe wokuthi yini a isitatimende sephephandaba kufanele isetshenziselwe… Izindaba. Ngizokuvumela ukuthi ufunde ingxoxo:
Okuxakayo wukuthi esinye sezizathu esikuthokozela kakhulu ukusebenza naso I-Dittoe PR ngukuthi bayabona ukuthi imizamo yabo yokuxhumana nomphakathi iyingxenye yecebo lokumaketha jikelele. Sisebenze kumakhasimende amaningi futhi saba nemiphumela ehlukile ngokukhipha ukukhishwa kwabezindaba ngecebo lokusesha eliqinile nangecebo lokuzibandakanya emphakathini. Lokhu kukhishwa kwabezindaba kuyisinyathelo esisodwa isu eliphelele lethu lokudlulisa lokho kubantu.
Kuyadumaza ukuthi izinhlobo ze-PR zesikole esidala njenge-PRDude aziqondi ukumaketha okungenayo, ukuguqulwa kokuguqulwa, amasu wekhasi lokufika, ukufaka uphawu, ukuqwashisa, ukwenziwa kwezinjini zokusesha… futhi kwesinye isikhathi abaziqondi zonke izinzuzo zesu lokuqukethwe elihle. Enye yamafemu amakhulu e-PR edolobheni lethu isanda kuvalwa… imboni iyashintsha futhi abakwazanga ukuqhubeka. Ngicabanga ukuthi yilokho i-PRDude eyikho ukuvikela.
Ngokuthumela i-tweet ngalokhu - ngaphandle kokunyathelwa phansi - i-PRDude inikeze ubufakazi bokuthi ukukhishwa kwethu ngabezindaba kube yimpumelelo. Ngiyalithanda iqiniso lokuthi uyavuma ukuthi ukuthole ukukhishwa kubekwe kahle ku-Google News. Kuhle lokho! Ngokusobala sesifinyelele izethameli ebesingakaze sizenze ngaphambili - umgomo wokusatshalaliswa kwethu kwe-PR. (Ngokuthokozisayo, kubonakala sengathi ukusatshalaliswa kwethu kwasendaweni ngandlela thile sekuhambile kuzwe lonke kumasayithi.) Sithole inqwaba yama-tweets nokushiwo yiwebhusayithi kusukela ekukhululweni.
Ukukhishwa kwezindaba akusimane nje kubhalwe “izindaba”. Imboni ye-PR iguqukile… kepha ishiya abanye ochwepheshe bayo be-PR ngemuva. Abathengi namabhizinisi bafuna imininingwane ngezinjini zokusesha, ngakho-ke ukuba khona kosesho oluyindalo kuyadingeka. Abathengi namabhizinisi bahlanganyela emphakathini, ngakho-ke ukuba necebo lomphakathi kuyadingeka. Kodwa-ke, amabhizinisi amaningi nezinsizakusebenza zemidiya zisencike emisebenzini yokusabalalisa izindaba ukuthola imininingwane abayifunayo - ngakho ukukhishwa kwabezindaba kusebenza kahle.
A ukukhishwa kahle kwabezindaba ngokusatshalaliswa okuhle kuzohlinzeka ngama-backlinks avela kumasayithi anegunya eliphakeme nokubaluleka embonini yakho. Sibonile ukulandelana okuningi ekukhishweni kwabezindaba kumakhasimende ethu, sabona izinga labo lithuthuka, futhi sathola imikhondo eminingi ngokuzisebenzisa.
Ngizoqhubeka nokusebenza nge okuqhubekayo ubudlelwano bomphakathi obuqinile lokho okuqhubeka nokungitholela namakhasimende ami amathuba amangalisayo kule mboni, kufaka phakathi izindatshana ezikwiNew York Times, Cult of Mac, Wired Magazine, iMedia Connection, VentureBeat, Mashable, njll. Futhi ngaphezu kwakho konke, zisobala ngomsebenzi wazo … Banesibindi esanele sokwabelana ngamagama abo nokuqina kwabo ku-inthanethi.
Ngakho… U-PRDude angahle angavumelani nami (manje usengisola ngenhla ngokuba nabalandeli mbumbulu). Kulungile, anginandaba. Akazona izilaleli zami futhi akanalwazi ngokusebenza kokumaketha okuphelele esikwenzayo. Ngenkathi ehambisa ukukhishwa kwabezindaba ngokungaziwa, sithola imiphumela yamakhasimende ethu futhi sikhulisa amabhizinisi abo. Ngiyethemba ngelinye ilanga uzokwazi ukuhweba ngomshini wakhe wokubhala futhi abheke ukuthi i-intanethi iguquke kanjani ngendlela esixhumana ngayo.
Tags: prqinaqaphelacindezela ukukhishwaezimayelana Nomphakathi
Umphumela Wethu Wokuqinisekisa Umbhali Wezixhumanisi ku-484% Yezinga Lokuchofoza Eliphakeme
Dec 28, 2011 ku-10: 30 AM
Ngicabanga ukuthi sekunesikhathi esingakanani kusukela lo mfana enza imfundo eqhubekayo? Oprofesa bazama ngamandla ukuqeda umqondo wokukhishwa “kwabezindaba” futhi baphikelela ekutheni kubizwe ukukhishwa “kwemidiya” ngoba… kahle… kungafeza konke okushilo, Doug.
Dec 29, 2011 ngo-3: 33 PM
Anginalutho oluphikisana nokusetshenziswa kwabezindaba njengecebo lokumaketha. Lokho ebengikukhomba nje bekungukuqukethwe kokukhishwa. Ugcine nini ukufaka umhleli wephephandaba noma ophrojusa wohlelo lwezindaba, into yokuqala abayicelayo ukukhishwa kwabezindaba. Ngokwengeziwe, uma uthumela ukukhishwa kwabezindaba ngalolu hlobo ocingweni, kuthunyelwa kubhokisi lokungenayo labahleli. Kungakho abahleli benenzondo yabantu be-PR abathumela udoti, kanti empeleni, kungabakhangisi abasebenzisa le sevisi kokuqukethwe okungadingi izindaba. Yilokho kuphela engikushoyo. Uma lokho kungukucabanga okwakudala, bese ungibiza ngokuthi isikole esidala, kepha ngicabanga ukuthi kubuhlungu uphawu olungaphezulu kosizo lapho uthumela izintatheli izintelezi ukuthi noma ngubani onesiqingatha sobuchopho uyazi ukuthi ngeke neze zimbozwe. Singakuphikisa lokhu ngakho konke okufunayo, kepha sivela emikhakheni ehlukene. Ngiyabahlonipha labo engibathumela okuqukethwe futhi ngizame ukuhlola ukuthi kuyinto abazoyidinga. Imayelana nokwakha ubudlelwano hhayi ukuqhuma nge-imeyili emhlabeni. Jabulela unyaka omusha!
Dec 29, 2011 ngo-6: 14 PM
PR Dude - Ngisakhipha udaba lokuthi “kuwudoti” noma “akulona udaba”. Ngikhulume ngendida kulokhu okuthunyelwe - kepha kukhona ngempela okukhona. Kubukeka sengathi kunohlobo oluthile lwethoni 'lomakhethi nobudlelwano bomphakathi' laphaya. I- DK New Media Ubudlelwano noDittoePR yizindaba - inkampani eqinile ye-PR eguquke futhi isebenza ne-ejensi yezindaba entsha. Futhi… i-ejensi yemidiya entsha ethola inani elingatheni ebudlelwaneni bomphakathi.
Ngoba awucabangi ukuthi kufanele izindaba, akusho ukuthi akunjalo. Impendulo ekukhishweni kwabezindaba ikhiqize impendulo enhle kakhulu. Eqinisweni, okwakho ukuphela kokugxekwa esidlangalaleni esingakuthola. Futhi, futhi, ukwahlulela ngokubekwa okuhle esikutholile - kwakuyizindaba ezaziswa abanye abaningi.
Ngiyayithokozela impendulo yakho eqotho engxoxweni, noma kunjalo!
Dec 29, 2011 ngo-6: 34 PM
Ngicabanga kanjalo. Angiqiniseki ukuthi usho ukuthini ngokubekwa kwabezindaba nokho. Noma yini ehamba ocingweni ithathwa yimithombo yezindaba ebhalisela insizakalo yayo, kepha ngabe kusho ukuthi intatheli izokuyeka akwenzayo ukumboza lolu hlobo lwezindaba. Ngo-1996, yebo, ngo-2011, cha. Ngingabanjwa umxhwele uma kukhona imithombo yezindaba ehloniphekile evela eceleni efana ne-Indy Star noma ngisho nokuhweba okufana ne-Adweek noma i-Ad Age kungakunika lokhu ukubukeka kwesibili. Uma uyiphotha njengombimbi noma ubambiswano, khona-ke ngibona inani lezindaba. Iwebhusayithi eyenziwe kabusha nje ayanele ngokwanele amazinga wobuntatheli ngombono wami. Angigxeki iqhinga, okuqukethwe nje. Bese futhi, bengiphendula komunye umuntu hhayi kokuthunyelwe kwakho.
Ngeshwa, umakhethi no-PR into ibilokhu iqhubeka iminyaka njengoba wazi. Hhayi ukucasula, kepha angithandi ukubizwa ngomthengisi. Sikhonza izinhloso ezimbili ezibalulekile kepha ezihlukile zamakhasimende nemikhiqizo ekugcineni, inhloso efanayo. Abantu be-PR bathembele kakhulu ebudlelwaneni obakhiwe nabahleli, abakhiqizi, ama-blogger, njll. Futhi kuyabacasula ukubezwa besitshela ukuthi bathola ukukhishwa kwezindaba okungasho lutho emabhokisini abo okungenayo. Uyi-blogger esikhaleni sokumaketha. Ungayiqhuba indaba mayelana neklayenti elithuthukise iwebhusayithi eyenziwe kabusha kubhulogi yakho? Yikuphi ongathanda ukubhala ngakho uma yonke iwebhusayithi evuselele isiza sayo iqala ukuthumela ukukhishwa kwezindaba ngakho? Ngabe unquma kanjani ukuthi yini okufanele ubhale ngayo nokuthi yini engafanele? Ngicela ungitshele ukuthi ngiyahlanya yini futhi angenzi mqondo lapha. Kungamaholide futhi kube nezinsuku eziningi ezichithwe ukuphuza. Halala! 🙂
Dec 29, 2011 ngo-6: 39 PM
I-PR Dude: Impendulo yindlela esinquma ngayo ukuthi yini esizobhala ngayo nokuthi yini esingabhali ngayo. Uma impendulo inhle, siyaqhubeka nokusebenzisa isu. Uma impendulo ingalungile, sithola entsha.Amaholide amahle nawe.
Dec 29, 2011 ngo-6: 51 PM
Ngiyabonga. Nginifisela okuhle kodwa. Ngazise uma uku-Big Apple futhi ngizokuthengela isiphuzo. Azikho izingxoxo mpikiswano nje. Jabulela unyaka omusha!
Jan 3, 2012 ngo-1: 03 PM
Ukuphela okuhle kakhulu empikiswaneni. Ngiyavuma ukuthi kuningi kakhulu "okungenangqondo" laphaya, kepha ngicabanga ukuthi ukukhishwa kokwethulwa kwewebhusayithi kulungile nje, futhi yilokho engikwaziyo ukuthi kuhle PR - kuya ngenkampani, abalaleli, izitolo ukukhishwa okutholakele to, etc. Ngisemuva ngokuphelele kuDouglas ekukhululweni kwakhe, kepha siyavuma ukuthi kufanele sikuqaphele ukukhishwa ngokweqile. Abanye benza i-blitz konke, futhi kubukela phansi ukubakhona kwabo.
Jan 5, 2012 ngo-1: 49 PM
Impikiswano enkulu ye-fallas, futhi kumnandi kakhulu ukubona abantu ababili abangavuma ukungavumelani ngenhlonipho! +1 kini nobabili!
Jan 13, 2012 ngo-6: 00 PM
Ngiyabonga. Angimazi mathupha uDoug, kodwa ngiyazi ukuthi ungumuntu ohlonishwayo emsebenzini wakhe, futhi noma ngabe uvelaphi, sonke kufanele siphathane ngenhlonipho. Ngifisa sengathi wonke umuntu angaphikisana ngendlela ephucukile ikakhulukazi abazongenela ukhetho lukamongameli noma omunye umuntu ozobamba isikhundla esikhethiwe. Ngibheja ukuthi sizobe sibona ukuhlaselwa okungekuhle nokwamuntu njengoba kuqala ama-primaries.